Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Guddiga Amniga Doorashooyinka | Onkod Radio
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Guddiga Amniga Doorashooyinka
Muqdisho, October 02, 2021 Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan looga hadlayay u diyaar garowga doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka la qaatay Guddiga amniga doorashooyinka, kuwaas oo isugu jira Taliyeyaasha Booliiska heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed, Booliska AMISOM iyo Booliska UNka oo ka taageera dhinacyada farsamada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahad celiyey guddiga amniga doorashooyinka sidii ay uga qeyb qaateen sugidda amniga doorashooyinkii Aqalka Sare, isagoo kula dardaarmay in ay sii wadaan dadaalkooda wadajirka ah ee ku aadan sugidda ammaanka ergooyinka iyo dhinacyada ku howlan hirgelinta doorashada.
Guddiga amniga doorashooyinka ayaa Ra’iisul Wasaaraha warbixin ka siiyey shaqooyinka ay qabteen iyo howlaha horyaala ee ugu horreyso sugidda amniga doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee dhowaan bilaaban doonta.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya S/G Cabdi Xasan Xajaar ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha ay u gudbiyeen lifaaqyo ku aadan baahidooda dhinacyada sugidda amniga, isla markaana ay diyaar u yihiin fulinta howsha loo xil saaray ee ah ammaanka doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xusuusiyey xubnaha guddiga musuuliyadda culus ee la saaray in ay ka soo dhalaalaan, maadaama wajiga labaad ee doorashadu uu yahay mid ka culus qeybtii hore.